I-Ethiopian Airlines isuke ngesimo sezulu esibi futhi yashushuluza ibaleka komgwaqo
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » I-Ethiopian Airlines isuke ngesimo sezulu esibi futhi yashushuluza ibaleka komgwaqo
Airlines • Airport • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zase-Ethiopia • Izindaba • Ukuphepha • ISouth Sudan Izindaba Ezintsha • Ubuchwepheshe • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Ama-Ethiopian Airlines indiza ET357 isuka eJuba iye e-Addis Ababa ngoLwesibili futhi ibe nohambo lomgwaqo umzamo wokusuka ngo-17.15 eJuba International Airport eSouth Sudan. Ngenhlanhla, bonke abagibeli abangu-21 nabasebenzi abebesendizeni yezindiza zase-Ethiopia bahambe bengalimalanga futhi sebebhaliswe kwenye indiza namhlanje ekuseni.
Isikhumulo sezindiza iJuba International sise-5 km enyakatho-mpumalanga yesifunda samabhizinisi sedolobha, osebeni olusentshonalanga yeWhite Nile. Idolobha kanye nesikhumulo sezindiza siseSouth Sudan esifundazweni iJubek. IJuba iyinhloko-dolobha nedolobha elikhulu kunawo wonke eSouth Sudan.
UKaputeni we-Ethiopian Airlines Bombardier Dash-8 Q400 uthathe isinqumo sokusuka lapho isimo sezulu singesihle okwenza kube nzima ukubona umgwaqo ovulekile.
I-Ethiopian Airlines iyilungu leStar Alliance.
Bonke abagibeli abangu-21 nabasebenza ebhanoyini lezindiza zaseTopiya abagibele umgwaqo izolo ebusuku sebebhaliswe ngenye indiza namhlanje ekuseni. ”
I-Ethiopian Airlines ibhekane nezingozi eziningi eminyakeni emibili edlule.
30-Aug-2018 I-DHC, kwashona abangu-18;
10-Mar-2019 737 Max, 157 ukushona kwabantu.
9-Oct-2019 Injini yomlilo, akukho ukufa kwabantu
I-10-Dec-2019 i-runway excursion: akukho ukulimala
Kwenzeke izingozi eziningana eSouth Sudan ekhungethwe yimpi eminyakeni edlule.
Izindaba ezingaphezulu kuma-Ethiopian Airlines: https://www.eturbonews.com/?s=%22Ethiopian+Airlines%22
ISpain neSaudi Arabia Bona Indlela Edlulela phambili ye-UNWTO
U-Bartlett Uncome Inhlangano YaseMelika YaseCaribbean Maritime...
Isisebenzi esisodwa sishonile, abathathu bangeniswe esibhedlela eSpain ...
Inkululeko eku-inthanethi yehla kakhulu unyaka we-11 zilandelana
ILithuania neKazakhstan zizokwethula umgibeli oqondile ...